Nosy Menjangan any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Nosy Menjangan any Bali. Indonezia
Nosy Menjangan any Bali
Overview ny nosy Menjangan
Nosy Menjangan any Bali miorina akaikin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny nosy andriamanitra. Ny velaran'ilay havoana dia 15 toradroa. km (izany hoe, 1 ha). Ity nosy ity dia voahodidin'ny haran-dranomasina amin'ny lafiny rehetra, eo afovoany misy trondro sy akorandriaka. Ny haran-dranomasina dia manilika ny onja mahery any akaikin'i Menjangan. Noho izany, ity nosy ity dia be mpitia amin'ny mpamily.
Tsy misy mponina maharitra ao amin'ilay nosy, afa-tsy ireo moanina hindoa vitsivitsy izay mipetraka akaikin'ny tempoly eo an-toerana mba hiambina ireo toerana masina ireo ary hitazona azy ireo milamina. Ny tempoly tsirairay any Menjangan dia samy manana ny angano.
Tempoly ao amin'ny Nosy Menjangan
Nandritra izay taona lasa izay, ny governemanta Indoneziana dia nanolo-tena hitahiry ireo biby sy zavamaniry anaty rano tsy manam-paharoa ao anaty faritra. Ohatra, voarara ny fanaovana vatofantsika akaikin'ny morontsiraka. Ny sambo ihany no afatotrao amin'ny mpamono sambon. Mba hitehirizana ny natiora, voarara ihany koa ny fananganana hotely sy fotodrafitrasa fizahan-tany hafa.
Menjangan dia tonga lafatra ho an'ireo izay te hisotro ronono sy miala sasatra ao anatin'ny natiora tsy voakitika. Tsy misy hotely, fisotroana na ivotoerana fialamboly. Na izany aza, mbola betsaka ny azo atao amin'ny nosy.
Ao Menjangan, misy ireto safidy fialam-boly manaraka ireto ho an'ny mpizahatany:
Milomano any an-dranomasina.
Mitsangatsangana any anaty ala.
Fitsidihana ireo tempoly eo an-toerana.
Amin'ny sambo ihany no ahafahanao mankany amin'ny nosy. Niondrana an-tsambo avy tany amin'ny tanànan'ny Labuhan Lalang eo amin'ny morontsiraka avaratry Bali izy ireo. Ny vola manofa sambo 400-000... Azonao atao ny mahazo ny Menjangan avy any Bali ao anatin'ny 40 minitra.
Mankany Labukhan Lalang avy any Denpasar sahabo ho 137 km, izay rakotra 3-4 ora.
Diving amin'ny nosy
Toerana misitrika (antsitrika) ao amin'ny nosy Menjangan
Ny Nosy Menjangan dia miorina amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Bali.
Address: Pulau Menjangan 82218, Negara, Bali, Indonezia
mandrindra: -8.09598, 114.516616
Nosy Menjangan amin'ny sari-tanin'i Bali
Azonao atao ny mahita azy amin'ny sarintany ifarimbonana ary manamboatra làlana mankany aminy amin'ny alàlan'ny sari-tanin'i Bali eo amin'ny faran'ny pejy.
Ahitana karazana biby maro ny nosy